Nginenyanga yesine yokukhulelwa
Kwenzekani kowesifazane omele umntwana ngenyanga yesine yokukhulelwa? Iziphi izinguquko ezilindele umama ozayo nomntanakhe? Masikhulume ngalokhu ngokuningiliziwe.
Ngenyanga yesine yokukhulelwa, izinyembezi zingenasizathu, ukusengozini ngokweqile nokufutheka, okwehluleka kakhulu umama ekulindeni umntwana ngenyanga yesithathu, kancane kancane uhlehlise ngemuva. Esikhundleni sale mizwa kuvela ukuthula okunamangalisayo nokuzola, umuzwa wokuzibandakanya eminye imfihlakalo. Umama ozayo uzongena ngaphakathi, elele iziqu zakhe. Manje akukho lutho olungathatha owesifazane okhulelwe ngaphandle kokulinganisela.
Futhi lokhu kuyiqiniso , ngoba phakathi nalesi sikhathi lapho usongo lokuqeda ukukhulelwa kukhulu kakhulu. Ukuze ingane iphephile, kudingeka uzivikele ngokwengeziwe kunanini ngaphambili. Kungaba kuhle kakhulu ukuthatha ikhefu emsebenzini bese uyisebenzisa endaweni yokuhlanza ekhethekile yabesifazane abakhulelwe noma ezweni. Khumbula konke ukuphazamiseka emsebenzini nasekhaya, ungangeni ekucindezelekeni. Khumbula ukuthi umsebenzi obaluleke kakhulu empilweni yakho manje uyenzeka ngaphakathi kwakho.
Kule nyanga, kungcono ukugwema ukuya ocansini , ikakhulukazi ngalezo zinsuku lapho kungenzeka ukuthi ube nezikhathi uma ungazange ukhulelwe. Phela, ezinsukwini ezinjalo ingozi yokwehla isanda izikhathi eziningana.
Uma unesisindo sokudonsa emhlane ongezansi, ubuhlungu nokuhlukumeza esiswini esingaphansi, ukukhishwa okukhulu okuvela esiswini, ikakhulukazi ngegazi, unganqikazi! Noma iyiphi yalezi zimpawu - isikhathi sokuphuza amaphilisi amabili no-shpy bese ubiza udokotela ekhaya.
Kusukela ngomhla weshumi nantathu kuya kwesonto leshumi nesithupha , i-toxicosis ingase izuze. Ukubonakaliswa kwayo kungaba kokubili ukuhlanza nokucabangela, futhi ngesimo sokulala nokubuthakathaka. Ukuze unqobe lezi zinkinga, kufanele njalo ngangokunokwenzeka uphume emoyeni omusha, udle kaningi, kodwa ngezigaba ezincane (ngenkathi ukudla akufanele kushise). Uma uzizwa unesifiso sokuhlanza, uncela emlonyeni wakho i-cube yokumnika okuneqhwa kwe-mint (qinisekisa ukuthi ihlale ikulungele efrijini). Ungakhohlwa ukulandela isisindo. Uma ungadonsela ekudleni, izikhathi eziningana ngosuku, ukuhlanza kwenzeka futhi isisindo sinciphile - bheka udokotela ngokushesha.
Manje udinga ukuqapha ngokucophelela ukudla kwakho futhi kunoma yikuphi ukungavumeli ukuqotshwa. Uma i-rectum ikhukhulayo, iqala ukucindezela esibelethweni, futhi lokhu kuyiphutha kakhulu kwengane. Ngakho-ke, zama ukuqinisekisa ukuthi imenyu yakho impela yayinemikhiqizo enjengemifino nezithelo ezintsha, isinkwa esinamagatsha, umlimi omuncu, ama-beet abilisiwe, i- sauerkraut . Ngenxa yalezi zinhloso, futhi njalo nsuku zonke esiswini esingenalutho siphuza ingilazi yamanzi.
Ngakho kwenzekani kulezi ziviki nomntwana?
Iviki leshumi nantathu nesine nane. Kungenzeka ukuthola ukuthi i-Rh isakhi neqembu legazi lezingane. Yena ngokwakhe uba njengomuntu omncane kakhulu. Umzimba wakhe usebenza njengomuntu omdala. Futhi uma isibindi ngaphambi kokuba isibindi sisebenze ku-hematopoiesis, esikhundleni sokukhiqiza i-bile, manje konke sekuye kwavela. Isikhumba se-crumb sisesebala futhi kusetshenziswa imithwalo yegazi. Ingane isivele iyakwazi ukuphuza isithupha sesandla sakhe futhi yenza imizamo yokuhamba, nakuba usengazizwa okwamanje.
Amasonto ayishumi nantathu kuya kweshumi nesithupha . Kuze kube manje, umsebenzi we-excretory wenziwa yi-placenta. Manje izinso zezinyane zaqala ukusebenza. Ama-gland of secretion yangaphakathi nawo ayathuthukiswa, ikakhulukazi izigulane eziyingozi. Inani le-amniotic fluid landa. Amathambo omntwana abe nzima, futhi amajwabu amehlo akhiwa.
Isisindo somntwana ngalesi sikhathi silinganiselwa ku-120-130 amagremu, nokuphakama - amasentimitha angu-14.
Isikhathi sokubeletha singamaviki angu-7
Ukukhulelwa nokuqeqeshwa komzimba
Izinkinga zokukhulelwa kanye nezindlela zokuzixazulula
Ngikhulelwe, kufanele ngenzeni?
Cocktail "I-Cherry blast"
Ukuthuthukiswa komuntu wengane esikoleni sokuqala
Imithi yokwelapha yokwelashwa umdlavuza webele
Ama-donuts ane-vanilla glaze nokufafaza
Yini okufanele ngiyithathe nami esibhedlela ingane esanda kuzalwa?
Abaculi abaphezulu kakhulu ababenenkinga yokuphuza utshwala
Indlela yokunquma isikhathi sokuvuthwa kokukhulelwa?
Hlola ubuciko bama-tubespian tubes
I-Kirkorov iphinde ihaqwe i-pink: i-scandal be?
Ubudala bokudala umndeni
Isipinishi isobho nge ushizi